Vaksinina, fizahan-tany, politika: fomba fijery misy ny zava-misy ataon'ny minisitra iray izay mahazaka sy mahery fo
Home » Vaovao Karaiba » Vaksinina, fizahan-tany, politika: fomba fijery misy ny zava-misy ataon'ny minisitra iray izay mahazaka sy mahery fo
fanarenana ny fizahan-tany
Ny fikambanana miandraikitra ny fizahan-tany manerantany toa ny UNWTO dia notsikeraina fa tsy afa-manoatra tamin'ny famahana ny krizy COVID-19 manerantany
ny Center Global Resilience and Crisis Management Center no mandray ny fanamby.
Rehefa nandrava ireo firenena Karaiba ny rivo-doza tamin'ny 2017 ity minisitry ny fizahan-tany ity dia sahirana nanalefaka ny fahasimbana. Rehefa namely indray ny rivodoza tao amin'io minisitra io dia nangataka tamin'ny tontolon'ny fizahan-tany hiara-hiatrika ny karazana fanamby miaraka.
Ny Fanambarana tao Montego Bay dia nosoniavina tamin'ny kaonferansa UNWTO tamin'ny taona 2018 izay nitaky ny hametrahana orinasa hamahana ny fikorontanan'ny fizahan-tany.
Miaraka amin'ny fanampian'ny mpianatra sy ny fahaizany miasa ao amin'ny University of the West Indies any Jamaika, ny Hon. Ny fizahan-tany any Jamaika, Edmund Bartlett dia nanambara ny fananganana ny G voalohanylobal Fizahan-toerana momba ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy. Taona maro taty aoriana dia natsangana ny foibe any Malta, Kenya, Nepal, Japon ary firenena hafa manerantany.
Tsy dia nahalala an'izao tontolo izao ny momba ny Coronavirus tamin'izany fotoana izany, saingy ity minisitra ity dia efa nampivondrona an'izao tontolo izao ary ny governemanta keliny no nandoa izany.
Ny fihanaky ny Coronavirus tamin'ny taona 2020 dia fihemorana lehibe ho an'i Jamaika. Tsy nilavo lefona ity minisitra ity fa nitady izay tsara indrindra ho an'ny fiarovana sy ny fiarovana ny fizahantany. Tsy vitan'ny hoe nanampy ny sarin'ny fireneny izy, fa nahavita nihazakazaka ny fizahan-tany tamin'ny fotoana sarotra indrindra.
Andriamatoa Bartlett dia nomena ny Maherifo momba ny fizahantany lohatenin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany fna ny fandraisany anjara ho an'ny fireneny sy izao tontolo izao.
Jamaika toy ny repoblika nosy hafa dia miankina betsaka amin'ny vola miditra vokarin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Miaraka amin'ny finoany mafy fa ny olana eo an-toerana dia voavaha tsara indrindra ao anatin'ny fomba fiasa manerantany, ny minisitry ny fizahantany ao Jamaicas Edmund Bartlett dia hita hatraiza hatraiza amin'ny maha-mpitarika manerantany ary olona ao ambadiky ny fahaizan'ny fizahan-tany.
Miasa tsy an-kijanona hanalefahana ny fijalian'ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany noho ny COVID-19, ny minisitra Bartlett dia nitady izay tombontsoa azo avy amin'ny boaty hatrany. Tsy vitan'ny nahavita nanangana tsena vaovao tamin'ny fametrahana sidina avy any Jamaika ka hatrany Nizeria izy, fa ny fanantenany ny fizahan-tany dia ny fampandrosoana ny vaksininy. Ny hany fianjerana dia ny fizarana miadana
Androany ny Hon. Ny minisitra Bartlett dia hiresaka momba ny politika fanaovana vaksininy, ny laharam-pahamehana amin'ny zava-misy ary ny zava-misy eo amin'ny toerana itodiana. Resadresaka nifanaovana tamin'ny manam-pahaizana iraisam-pirenena no notarihan'ny Profesora Lloyd Waller, filohan'ny Global Tourism and Resilience Management, monina ao Jamaika.
Ity ny asan'ny minisitra Bartlett:
Rehefa nitohy nihodina ny toekarena manerantany tamin'ny fiatraikany mahery vaika tamin'ny areti-mifindra coronavirus, ny fifantohana tamin'ny 2021 dia niova tamin'ny ankapobeny mba hiantohana ny fampidirana vaksiny haingana ny vaksiny ho any amin'ireo faritra voa mafy indrindra manerantany, izay hita fa tena manakiana mafy handresena ny tolona manerantany manohitra ny COVID-19 ary koa hamerenana amin'ny laoniny ny toekarena manerantany amin'ny fotoana fohy indrindra.
Noho izany antony izany dia mariky ny fanantenana feno fanantenana fa vaksinina sahabo ho 206 tapitrisa sahady no efa natolotra manerana ny firenena 92 ​​manerantany, izany hoe 6.53 tapitrisa eo ho eo isan'andro no ampiasaina.
Satria maro ny fitsapana sy fitsapana vaksiny atao isan'andro, indrindra amin'ny toe-karena mandroso kokoa, vaksinina maro kokoa no nohajain'ny World Health Organisation ho an'ny fampiasana sy ny fanaparitahana be dia be taorian'ny nanehoany fahombiazana lehibe nandritra ny fitsapana nahazo ny COVID-19, matetika aorian'ny roa na fatra bebe kokoa.
Ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech izao dia nodiovina mba hampiasaina manerana an'i Amerika Avaratra, Eropa ary Moyen Orient, ary natomboka tany amin'ny firenena 92 ​​farafahakeliny ny fampielezana vaksiny. Ireo mpanamboatra Covishield, ilay vaksinina AstraZeneca novokarina any India, dia efa nizara tavoara an-jatony maro ho an'ny firenena any Karaiba sy Amerika Latina, toa an'i Dominica, Barbados, Dominican Republic, Trinidad & Tobago, Arzantina ary Ekoatora.
Ny Serum Institute of India, iray amin'ireo mpanao vaksiny lehibe indrindra eran-tany, dia nampanantena fa hamokatra 1.1 miliara fatra amin'ny vaksinin'ny AstraZeneca. Vao haingana ny WHO dia nanamafy fa firenena 36 any Amerika Latina sy Karaiba no hahazo 35.3 tapitrisa amin'ny dingana voalohany fandefasana. Sina sy Russia koa dia mivarotra sy mizara ny vaksinin'ny COVID-19 any Amerika Latina.
Na dia miarahaba an'ity zotom-po eran-tany sy hafanam-po eran-tany ity aza aho manodidina ny ezaka fanaovana vaksiny COVID-19 dia misy olana maro. Voalohany, amin'ny taha-pahavitrihana vaksiny isan'andro maneran-tany, 6.53 tapitrisa doka eo ho eo, haharitra 5 taona eo ho eo ny 75% amin'ny mponina amin'ny vaksinina roa-doka araka ny fikarohana nataon'ny Bloomberg. Ity haingam-pandeha ankehitriny ity dia tsy maintsy haingam-pandeha satria tsy afaka miandry dimy taona ny ezaka fanarenana ara-toekarena manerantany, indrindra eo amin'ireo toekarena voa mafy indrindra.
Faharoa, misy tsy fitoviana lehibe amin'ny fitsinjarana vaksinim-pirenena. Ny sary mipoitra dia ny hoe ny firenena mandroso dia toa mandà ny fomba iraisana amin'ny fanamafisana ny tsy fitoviana amin'ny zom-pirenena. Nampitandrina noho izany ny OMS fa eo amoron'ny “tsy fahombiazan'ny fitondran-tena mahatsiravina” izao tontolo izao satria mety ho taraiky ny firenena mahantra noho ny fisian'ny vaksinin'ny vaksiny any amin'ny toekarena mandroso izay betsaka lavitra noho ireo any amin'ny toekarena mivoatra sy mandroso - eny fa na dia ireo firenena manana taham-pahafatesana mitovy amin'izany.
Na dia i Etazonia sy ny ankamaroan'ny firenena manankarena aza dia nanomboka nanao vaksiny fanindroany ny olom-pireneny hanohitra ny COVID-19, ireo firenena an-dalam-pandrosoana, fonenan'olona an'arivony tapitrisa, dia mbola tsy nahazo famatsiana vaksinina akory. Raha ny marina, firenena efa ho 130 no mbola tsy nanolotra vaksin iray na kely aza ho an'ny mponina mitentina 2.5 tapitrisa olona, ​​hatramin'ny herinandro lasa teo. Ny fanaparitahana vaksinim-borona tsy mitovy ankehitriny koa dia midika risika bebe kokoa amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Inona avy ireo fiantraikan'ireny fivoarana ireny amin'ny toekarena miankina amin'ny fizahan-tany mety hapetraky ny olona iray? Mazava be ny heviny. Miaraka amin'ny tranga 45 tapitrisa mahery voamarina ary maty maherin'ny 1 tapitrisa, firenena sy faritany manerana an'i Amerika, indrindra ny mahantra indrindra amin'izy ireo, dia miaina krizy ara-pahasalamana, toekarena ary sosialy mbola tsy nisy toa azy.
Ny toekarena miankina amin'ny fizahan-tany dia namoy ny 12% amin'ny harin-karena faobe raha oharina amin'ny fihenan'ny toekarena manerantany 4.4%. Ny fidiram-bola amin'ny fanondranana fizahantany dia midina manerantany eo anelanelan'ny $ 910 miliara ka hatramin'ny US $ 1.2 trillion amin'ny taona 2020. Teo anelanelan'ny asa 100-120 tapitrisa amin'ny dia sy ny fizahan-tany no sorona tamin'ny taona 2020.
Ny fivezivezena amin'ny hotely manerana ny toerana onenan'i Karaiba dia eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 30% tamin'ny taona 2020. Ny fahatongavan'ireo mpizahatany dia 40 ka hatramin'ny 60% no nilatsaka tamin'ny taona 2020. Betsaka ny hotely sy ny fizahantany mpizahatany no ahiana ho tafiditra anaty tsy fahazoana vola sy fandraisana.
Ny fizahan-tany dia motera fitomboana any Karaiba ary ny fanelingelenana maharitra dia mitera-doza. Ra mandriaka be ny toekarentsika ary mila atsipy andalana velona. Ny zava-misy manjo ireo toekarena ireo ankehitriny, ary koa ny hafa manerana ny faritra an-dàlam-pandrosoana dia azo faritana ho krizy maha-olombelona.
Mazava ny vahaolana: mila hatsaraina haingana ny fidirana amin'ny vaksiny amin'ireo firenena ireo. Tsy azontsika atao ny manao politika amin'ny famaliana ny valin'ny krizy ankehitriny. Ampiasaiko araka izany ny laharam-pahamehana amin'ny toekarena miankina amin'ny fizahan-tany amin'ny vaksiny.
Zava-dehibe ny hahatafavoaka velona azy ity sehatra ity mandritra ny ary ivelan'ny krizy ankehitriny mba hahafahany manohy manatanteraka ny anjara asany lehibe amin'ny maha-loharanom-pahefana lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny harinkarena sy ny fitomboana.
Tsy isalasalana fa ny fihemorana lava sy ny famerenana amin'ny laoniny ity sehatra ity dia hanambara fahasahiranana ara-toekarena izaitsizy ary mety ho famoizana olona amina miliara manerantany.
IATA: Mitohy ny fandorana vola an'habakabaka COVID-19
Ny fizahan-tany Hawaii dia faly tamin'ny fisokafan'ny Oahu hatramin'ny alakamisy
Thailandy mankany UK: Endrey ny nanovan'ny COVID-19 ny tontolo
Mandeha ny anglisy fa tsy amin'ny Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad, na Emirates Airlines